၂၀၁၀ နှစ်သစ် ကို ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ မှုတွေ နဲ့ တို့မြန်မာ တွေ လျှောက်လှမ်း နိုင်ပါစေရှင်.။
၂၀၁၀ ခုနှစ်သစ်ဆီသို့ "
[၂၀၁၀ နှစ်သစ် ကို ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ မှုတွေ နဲ့ တို့မြန်မာ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 31, 2009
Labels: ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ နှစ်သစ်
၂၀၀၉ နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့လေးကို အံ့သြ စရာ ပန်းချီကားလေးတွေနဲ့ နုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်ရှင်.။
တကယ်ကို ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ပန်းချီပါပဲ ...
၂၀၀၉ နှစ်ဟောင်း ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့လေးကိုတော့ ဤပန်းချီ ပြပွဲလေးနဲ့ နုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်ရှင်.။
အဓမ္မဝါဒီများအတွက် ၂၀၁၀နှစ်သစ်ဆုတောင်းကို ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 30, 2009
Voice Of Burma စာစောင်...
နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ နအဖက လှည့်ဖြားကစားလေ၊ နအဖအတွက် လုပ်သူတွေကလည်း ခြေလှမ်းသွက်လေ၊ ပြည်သူတွေ မျက်စိရှင်ရှင် နားစွင့်စွင့်နဲ့နေကြပါဗျို့ .။
သိန်းတင်အောင်နဲ့ ဖြိုးမင်းသိန်း တို့က ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု လုပ်လိမ့်မယ်။ နေ့လည် (၁) နာရီကနေ (၃) နာရီအတွင်း။ နေရာက အမှတ် ၁၂၃၊ ဘီ (၃)၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ပါ။ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲကော်မတီ ဆိုပြီး နာမည်ခံထားတယ်။
သူတို့ ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံက ၀န်ကြီး အောင်သောင်းရဲ့ PA ဗိုလ်ကြီး ကိုကိုနိုင်ပါ။ သူတို့ထဲမှာ ကျောင်းသားအမည်ခံပြီး ၈၈ တုန်းက ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းသွားတဲ့ ဖောက်ပြန်ရေးသမား ဘီဘီစီ ကိုကိုလတ်ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေပါတယ်။ ကြားထဲက ပွဲစားလုပ်နေသူက အေးလွင်ရဲ့ အလိုတော်ရိ တင်မောင်အေးပါ။
အစီအစဉ်တွေအားလုံးကို မြို့နယ် မ-ယ-က နဲ့ရော၊ SB သတင်းတပ်ဖွဲ့ရော၊ တာမွေ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ရော ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ပြည်ပက မြန်မာသတင်းဌာန အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများကို ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက လုပ်သယောင်ယောင် သတင်းလွှင့်ပြီး ဖိတ်ထားပါတယ်။
သူတို့အားလုံးဟာ အေးလွင်နဲ့ မတည့်သယောင်ယောင် ဟန်ပြပြီး အေးလွင် မြောင်းထဲရောက်နေရာကနေ ပြန်ဆယ်တင်ဖို့ စနစ်တကျ ဗျူဟာဆွဲပြီး လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ အေးလွင်ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဗျူဟာမြောက် ၈၈ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖြိုခွဲပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်တွေကို မှတ်သားပြီး သင့်လျော်သလို propaganda အလုပ်များမှာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
(၁) သိန်းတင်အောင်ဟာ အေးလွင်နဲ့အတူတူ ၀န်ကြီးအောင်သောင်းရဲ့ favour ကိုရဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကောင်းကြောင်း မဟုတ်တရုတ်တွေ စာထုတ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ 141 ခေါင်းဆောင်လိုလို ၈၈ ကို အရောင်အသွေးမှိန်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) ဘီဘီစီ ကိုကိုလတ်ဟာ ခင်ညွန့်တို့ ထောက်လှမ်းရေး မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း စ-အ-ဖ နဲ့ SB တို့နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ပြန်ကြိုးစားလာပါတယ်။ သူက အခု သိန်းတင်အောင်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းထားပါတယ်။ ( ဒါပေမယ့် အပြမှာတော့ မတူသယောင် လုပ်ထားတယ်။)
(၃) ဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံက ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းပါ။ သူက ကိုဌေးကြွယ်နှမကို ရအောင်ချိုင်ပြီး NLD နဲ့လည်း မရအရ ပူးကပ်နေပါတယ်။ သူ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို သန်လျင် SB က ထောက်ပံ့ပါတယ်။
(၄) တင်မောင်အေးက အမည်မထင်မရှားနေပြီး internet ဆက်သွယ်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အေးလွင်နဲ့တုန်းကလည်း ဒီလို အလုပ်လုပ်ပေးလို့ GSM ဖုန်းတစ်လုံး အမြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဝေစု မတည့်တော့လို့ သိန်းတင်အောင်လိုပဲ အေးလွင်က ဖယ်ထုတ်ထားတာပါ။
(၅) နေမျိုးဝေက ဘလော့ဂ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး SB ရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးယန္တရားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူပါ။ သူက ရှမ်းပြည် ခွဲထွက်ရေး စိတ်ကူးယဉ် ဦးရွှေအုန်းကို ချဉ်းကပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူက အဲဒီသိန်းတင်အောင်တို့ရဲ့ ဒိုင်ခံ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးဆောင်ရွက်သူပါပဲ။
(၆) နေမျိုးဝေ၊ တင်မောင်အေးတို့ဟာ UDP အတွင်းရေးမှူး ကျော်မိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ပြည်တွင်း မှာ ပါတီဖွဲ့စည်းခွင့်ရရင် တစ်နည်းတစ်ဖုံ UDP အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ၊တာမွေမြို့နယ်တွင် အသက်၂နှစ်ခွဲအရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး ၆ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခြင်း..။
ရန်ကုန်မြို့၊တာမွေမြို့နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်းရှိ ၆ထပ်တိုက်သစ်တစ်ခုမှ
ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် ၂၇ရက်နေ့ နံနက် ၇နာရီ၅၀မိနစ်ခန့်အချိန်တွင် ၆ထပ်မှပြုတ်ကျ
သေဆုံးခဲပါတယ်။ကလေးပြုတ်ကျချိန်တွင် အိမ်တွင် ကလေးတစ်ဦးတည်းသာကျန်နေခဲ့ပြီး၊
မိခင်ဖြစ်သူမှာ အရင်နေ့များက ဈေးသွားတိုင်းအမြဲခေါ်သွားလေ့ရှိသော်လည်း ထိုနေ့တွင်မှ
ကလေးအိပ်ပါစေတော့ဟုခေါ်မသွားဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကလေးကို တာမွေမြို့နယ်ရှိ အထူးကုဆေးခန်း
ကြီးတစ်ခုသို့ အရင်ဆုံးခေါ်သွားပြရာ ကလေးဆေးရုံကြီးသို့သွားရန် စေခိုင်းသဖြင့် ကလေး
ဆေးရုံသို့ အသွား လမ်းတွင်ပင်ကလေးအသက်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောင်ဒီလို အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်
မိဘများအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ သားသမီးများကို အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ခြင်းများ
မပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်းနဲ့ အနာဂတ်ရဲ့  ကလေးငယ်များကို ပိုမို ဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့
ပန်ကြားရင်း ဤသတင်း လေးအားတင်ပြလိုက်ပါတယ်.။
သတင်း ပေးပို့ ပေးသော မောင်လေးရဲကို အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 29, 2009
အသျှင်ဥတ္တမ(နှစ်၁၃ဝ ပြည့်) အထိမ်းအမှတ် (၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၉)
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၈)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ရခိုင်ပြည် စစ်တွေမြို့ ရှိ ရူပရပ်တွင် ဖခင် ဦးစံ မြ နှင့် မိခင် ဒေါ်အောင်ကြွဖြူတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည် မောင်ပေါ်ထွန်းအောင် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ငယ်ရွယ်ချိန်အခါကတည်းက ပညာရေး ထူးချွန်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများက ရှင်သာမဏေ ၀တ်ပေးရာမှ ရှင်ဥတ္တမ ဘွဲ့အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၉နှစ်တွင် ရဟန်းပြုပြီး နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့သို့ ရဟန်းဝတ်နှင့်ပင် သွားရောက်ခဲ့ရင်း နိုင်ငံရေးစိတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ဘာသာ စကားပေါင်း(၉)မျိုးကို ကောင်းစွာတတ်မြောက်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘောဒီး ယား၊ ကိုးရီယား၊ အီဂျစ်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ ပြင်သစ်နိုင်ငံများ အပါအဝင် အာရှတိုက်မှ နိုင်ငံအများ အပြား တို့ကို ခရီးလှည့်လည်ခဲ့သည်။ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ၁၉၂၀ ခုနှစ် တွင် ဗမာတပြည်လုံးသို့ လှည့်လည်ကာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တရားများကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောပြောမှုဖြင့် ၁၉၂၀ မတ်လ တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၁၂ လ အပြစ်ပေးခံရသည်။ ဆရာတော်သည် ၁၉၂၄တွင်လည်း“အစိုးရမကောင်းလျှင်မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ငါတို့မှာ ရှိတယ်၊ ငုံ့မခံကြနဲ့” ဟု ပြည်သူများကို လှုံ့ဆော် ဟောပြောခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ထောင် ၃နှစ် ကျခဲ့ပြီး ၁၉၂၈တွင် တတိယအကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှအစိုးရ ဘုရင်ခံချုပ်ကိုလည်း “ဆာ ရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်းဗမာပြည်မှထွက်သွား ပါ” ဟူသော စာကို ရေးသား ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မှုခဲ့ပြီး ပျံလွန်တော်မှုချိန်တွင် သက်တော် ၆၀ နှစ်၊ ဝါတော် ၄၁ ၀ါ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပျံလွန်ချိန်အထိ နယ်ချဲ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် နိုင်ငံရေးသမားတဦး မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံရေးအကျိုးဆောင် တဦးသာဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်တွင် နိုင်ငံရေးသမားတဦးကဲ့သို့ လက်ဝဲ၊ လက်ျာနှင့် လစ်ဘရယ်စသော နိုင်ငံရေးဝါဒများ မရှိခဲ့ပါ၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ကောင်းစားရေးအတွက် ပရဟိတအလုပ် သက်သက်သာ ဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာတော်သည် မီးမောင်းထိုးပြ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်သူများတွင် အတ္တဟိတ ဆိုသော ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို လုံးဝအဓိကမထားကြပါ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်၊ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအား တပါးကျွန်ဘဝက လွှတ်မြောက်ရေးနှင့် လူသားရင်းမြစ် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးသည်သာ အဓိက အခြေခံ ခံယူကြပြီး မိမိအသက် ခန္ဓာ ဥစ္စာကိုပင် စတေးထားသူများပင် ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအပါအဝင် ဝံသာနုခေတ်က ပုဂ္ဂိုလ်များ။
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၁) နှစ်ပြည့် ဓာတ်ပုံ ထဲကပြောသော အမှတ်တရများ.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, December 28, 2009
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ (၂၁)နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဘွယ် အမှတ်တရ.။
ဒီဇင်ဘာ (၂ရ)ရက် မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ (၂၁)နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဘွယ် အမှတ်တရ.။
မိထ္ထိလာထောင်၌ ထောင်ဒဏ်(၁၉)နှစ် ကျခံနေရသော အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်၊ တွဲဖက်တာဝန်ခံ(၁)၊ ကိုထွန်းထွန်းနိုင်(ခ) ဖိုးဥာဏ် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဇနီးမအေးအေးသက်နှင့် သားဖြစ်သူ ဖိုးဥာဏ်တို့သည် အမှတ်(၁၇)ဗောဓီညောင်ပင်လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေအိမ်၌ ယနေ့(၂၇.၁၂.၀၉)နေ့ နံနက်တွင် ပင့်သံဃာတော်ငါးပါးအား အရုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ်၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေတွက်တိုင်း ဝထ္ထုငွေ ၂၂၀၀ိ ကျပ်၊ အပြာ ရောင်မျက်နှာသုတ်ပုဝါတို့ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ကိုထွန်းထွန်းနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်း
ခဲ့သည်။ ဇနီးနှင့်သားမှ အကျဉ်းသားဝတ်စုံအရောင်ဖြစ်သည့် အပြာရောင်ဝတ်ဆင်၍ ဆုတောင်း
ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဟု သိရသည်။
ဆုတောင်းပွဲသို့ ဖိတ်ကြားထားသည့် ရပ်ကွက်ပြည်သူများ၊ အကျဉ်းသားမိသားစုများနှင့် နိုင်ငံရေး
မိတ်ဆွေများ တက်ရောက်ကြသည်။ ဧည့်ပရိတ်သတ်များကို ကြက်သားပလာတာဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့သည်
ပေးပို့ ပေးသော မောင်လေး စိုင်းငယ် အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ရင်ထဲက ပြည်သူ့ မေတ္တာ အမှန်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်သာ.။
ပြည်သူလူထုကလေးစားချစ်ခင်မှုကိုဘာနဲ့ မှ မလုပ်ယူဘဲ ပြည်သူတွေကို မေတ္တာစေတနာ
ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ယနေ့ထိတိုင်း ခံယူလျက် ရှိတဲ့ ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်အားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
ဤအောင်နိုင်ရေး မှတ်တမ်း သည် မြတ်လေးငုံ ၏မှတ်တမ်း သာဖြစ်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, December 27, 2009
မိဘကျေးဇူး အမှန်တကယ် သိတတ်ရိုသေတယ်ဆိုရင် မိဘစကား မိဘဖြစ်စေချင်တာကို လက်တွေ့ လေးစားလိုက်နာရပါတယ် အောင်ဆန်းဦး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မျက်နှာကိုမှ မထောက်မြန်မာနိုင်ငံ စစ်မိစ္ဆာတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ဘဝင်မြင့်အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ အောင်ဆန်းဦးကို မြန်မာပြည်သူတို့က နွားလောက်မှ အသိတရားမရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပြည်သူအားလုံးက ဝင်ခွင့်ပေးစရာ မလိုဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားကြီး အောင်ဆန်ဦးဆိုတာလည်း ပြည်သူအားလုံးက အသိအမှတ်ပြု
စရာမလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ အသိအမှတ်ပြုစရာမလိုတာလည်းဆိုရင်ဘဝင်မြင့်အောက်ခြေလွတ်တာ
လည်းမပြောနဲ့ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေဟာ အောင်ဆန်းဦး မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီး အကုသိုလ်လာလုပ်တဲ့
အချိန်မှာ အသိတရားမရှိတဲ့ အောင်ဆန်းဦးရဲ့နောက်မှာ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေနဲ့ တစ်နှစ်တစ်ခါ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်ကို ဆွမ်းလာကပ်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းဦးဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်၊ မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသား၊ မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို မလိုက်တော့ပဲနဲ့ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေရဲ့ အယူဝါဒလမ်းစဉ်ကို
လိုက်သွားတဲ့ အောင်ဆန်းဦးကို ပြည်သူအားလုံးက စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးကိုရရှိတဲ့အချိန်
်မှာလည်း အယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ အောင်ဆန်းဦးကို လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့
သားကြီး အောင်ဆန်းဦးလို့ မပြောကြပါနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်၊ ပြည်သူအတွက်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်
ကိုယ်တော်မြတ်၊ လူသားအားလုံးနဲ့ သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက်ကို စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးကို စွန့်ပြတော်
မူခဲ့ပါတယ်။ စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် -
သားသမီးကို စွန့်တာက ပုတ္တရိစ္စာဂ၊
ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်လွှတ်တာက ဇီဝိတပရိစ္စာဂ - ကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးကို လူသားအားလုံးအတွက် နည်းပေးလမ်းပြအဖြစ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်
ပြည့်စုံတဲ့ လူသားအားလုံးဟာ သေသွားခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာကြီးမပျောက်ကွယ်သရွေ့ထင်
ရှေးရှေးက မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကို ကြည့်မနေပဲနဲ့ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတွေကို
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ နေမ၀င်အင်ပါယာဆိုတဲ့ (ဗြိတိသျှ)အင်္ဂလိပ်တွေ၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို
တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရဲဘောသုံးကျိပ်တို့သမိုင်းကို ကြည့်လိုက်ပါ။
အဲဒီသမိုင်းကို စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေနှင့် အသိတရား မရှိတဲ့ အောင်ဆန်းဦးတို့ဟာ ကောင်းတဲ့သမိုင်း
နောက်ကို မလိုက်ပဲနဲ့ ခွေးကျင့်ခွေးကြံ ကြံတဲ့ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေနောက်ကို လိုက်သွားတဲ့ အောင်ဆန်းဦး
ဟာ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ်ဝန်းကျင် မော်ဒယ်မလေးနဲ့ လာပြီးတော့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်ကို ဆွမ်းလာကပ်သွားတာကတော့ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းဦးဟာ ဒါနမျိုးစေ့ ဘယ်လောက်ပဲ မြှုပ်နေမြှုပ်နေ အောင်ဆန်းဦးရဲ့ ဒါနဟာ
နှမ်းစေလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းဦးဟာ ကိလေသာအမှောင်ဖုံးပြီး စစ်မိစ္ဆာတွေနဲ့
ပေါင်းပြီးတော့ ပတ္တမြားလို တောက်ပနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
နွံထဲမြှုပ်ဖို့ကို စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ကြံနေတာကို တို့ပြည်သူ/သားတွေအားလုံးကရပ်
ကြည့်နေတော့မှာလား .... ?
ရပ်ကြည့်မနေကြပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအားလုံး အဲဒီစစ်မိစ္ဆာခွေးတွေ ရှိနေသ၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်စားထားခဲ့တဲ့ ဆင်းတုတော်တွေကို ခေါင်းတွေဖြတ်၊ ဗိုက်တွေဖောက်
ပြီးတော့ ထာပနာပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲရောင်းချပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးနေတဲ့ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေကို ငရဲပြည်ပို့ကြရမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတွေ ကြည်ညိုလေးစားခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေကိုလည်း ဖျက်ဆီးတယ်၊ ရဟန်းသံဃာတွေကိုလည်း သတ်ခဲ့တယ်၊ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း သတ်တယ်၊ ပြည်သူအား
နိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေကြောင့် မိမိတို့ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေကို လေးစားလိုက်နာရမှန်း မသိရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ယခုပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေ လက်အောက်ရောက်နေတဲ့ စစ်အာဏာရူးလေးတွေဟာ
ဘုရားကို ဘုရားမှန်း မသိ၊ တရားကို တရားမှန်း မသိ၊ သံဃာကိုသံဃာမှန်း မသိ၊ ကျေးဇူးရှင်ကို
ကျေးဇူးရှင်မှန်း မသိတဲ့ စစ်မိစ္ဆာခွေးတွေကို တိုက်ပွဲဝင်ပြီး ငရဲပြည်ပို့လိုက်ကြပါလို့ ဆိုပြီးတော့ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ကျမ တို့၏ လူထုခေါင်းဆောင် အပေါ်ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် သော ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းအကြောင်း တစ်ပိုင်းတစ်စ။
ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသလောက် ပြောပြပါရစေ ...
ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့ အဖေက မော်လမြိုင်မှ တရုတ်လူမျိုးပါ။ သူ.အမေကတော့ တနင်္သာရီကဘဲ
မွန်အမျိုးသမီး။ သူဟာ မောင်နှစ်မ (၅) ယောက်အနက် အကြီးဆုံး မော်လမြိုင် မော်တလိမ်း
ကျောင်းက ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်မှာ Zoology နှင့် ဘွဲ.ရ ပါတယ်။
သူ.မိသားစုဟာ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းလာပြီး ပြည်လမ်းမ လေဟာပြင်ဈေး (ဟောင်း) မှာ ဆေး
ရောင်းပါတယ်။သူ.နာမည်ရင်းက သိန်းလဲ့နွယ် လို.ခေါ်ပါတယ်။ သိန်းလဲ့နွယ်ရဲ့ အမေဟာ
ယောက္ခမဖြစ်သူ တရုတ်မိသားစုရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရလို. သိန်းလဲ့နွယ် ဘ၀မှာ ခံစားချက်
သူ.ရဲ့ မြင့်မားခြင်တဲ့စိတ် လူထဲဝင်ခြင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြိူးစားခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းကို အထင်
ကြီးတဲ့ သိန်းလဲ့နွယ်ဟာ တက္ကသိုလ်မှာ demonstrator လုပ်ရင်း သံရုံးပါတီတွေ တက်ရောက်ခဲ့ ကျက်စားခဲ့ပါတယ်။
ပါတီဂျပိုး သိန်းလဲ့နွယ်ဟာ ဂျာမန် လူမျိုးတစ်ယောက်နှဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာ
တွဲခဲ့ပြီး အတူနေခဲ့တော့မလောက် ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။(၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ ဘွဲ.ရပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ သရုပ်ပြဆရာမ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သုခမြိုင်မှာနေပြီး ညဘက် နိုင်ငံခြားသား
တွေနဲ့ ပါတီသွားရင် ပြည်လမ်းက သူငယ်ချင်းအိမ်မှ တဆင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပါတီတက် အရက်သောက်ရင်း ဂျာမန်အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ living together ၃-၄ နှစ်နေခဲ့ပါတယ်)။
ယူအက်စ်ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ အဖိုးကြီးကို ပစ်ခဲ့လို. အမေရိကန်အဖိုးကြီးဟာ ရန်ကုန်က
သူ့အိမ်နီးခြင်း ဆရာဝန်မကြီးတစ်ဦးကို မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ပြောပြခဲ့တာ မြင်တွေ.ဘူးပါတယ်။
ဒေါ်သိန်းလဲ့နွယ်ဟာ ယူအက်စ်ရောက်ပြီးနောက် အမျိုးသား (အဖြူ) တစ်ဦးနှင့် ထပ်အိမ်ထောင်ထပ်
ကျဘူးပြီး ကွဲသွားတယ်လို. သိရပါတယ် ( အတိအကျတော့ မသိပါ)။
နောက် တော့ အောင်ဆန်းဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ဒေါ်သိန်းလဲ့နွယ်ဟာ ယူအက်စ်ရောက်ပြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းအဖြစ်ဖြင့်၎င်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ချွေးမအဖြစ်၎င်း အလွန်လှပစွာ ၀တ်စားဆင်ယင်၍ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားများတွင် ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့်အတူ သတင်းစာမျက်နှာဖုံးတွင် ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။
တစ်သက်လုံး အညတြဘ၀ဖြင့် နေခဲ့ရပြီး အလွန်မြင့်မားချင်သူ သိန်းလဲ့နွယ် (ခေါ်) ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း ဆုတောင်း ပြည့်ခဲ့သည့်အပြင် ၄င်း၏ မောင်နှမများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နအဖဗိုလ်ချုပ်က
တော်များ၏ အကူအညီဖြင့် ထောက်ပံ့ခဲ့ ကူညီခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းသည် သူ၏
မောင်နှမများကို ကူညီရန် ၀န်မလေးခဲ့ပေမဲ့ ဦးအောင်ဆန်းဦးကတော့ တစ်ဦးတည်းသော
နှမဖြစ်သူ မုဆိုးမကို နေအိမ်မှာ မနေနိုင်အောင် ဒုက္ခပေးဘို. ပြင်ဆင်နေသည်မှာ ရင်နာစရာ
ဦးအောင်ဆန်းဦးရော ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းပါ ယူအက်စ် နိုင်ငံသား ခံယူထားကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးအတွက် လုပ်နေရုံတင်
မဟုတ်ဘဲ၊ နအဖအလိုကျတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုတိုင်ကပါ မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလို့ အနှောင့်အယှက်ပေးတာတွေ လုပ်နေရတာလည်းဆိုရင်
အောင်ဆန်းဦးရဲ့မိန်းမ မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းကြောင့် အစပြုတယ် ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
(ရေးသားဖေါ် ပြသူ - မောင်မောင်)။
ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးပို့ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ပေးပို့ ပေးသော ဒိမိုဝေယံ နှင့် အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, December 26, 2009
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 25, 2009
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင် ကပြောသော အတွေးအခေါ်....
Scepticism over Myanmar polls (aljazeera)
မြန်မာပြည် တည်းက လူငယ်တည်းက လူငယ် ..။
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်နှင့် နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းမျာ...
၂၀၁၀ နှစ်သစ် ကို ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ မှုတွေ နဲ့ တ...
၂၀၀၉ နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့လေးကို အံ့သြ စရာ ပန်းချီက...
ရန်ကုန်က မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော...
နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ နအဖက လှည့်ဖြားကစားေ...
ရန်ကုန်မြို့ ၊တာမွေမြို့နယ်တွင် အသက်၂နှစ်ခွဲအရွယ် ...
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၁) နှစ်ပြည...
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ (၂၁)နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဘွယ...
ရင်ထဲက ပြည်သူ့ မေတ္တာ အမှန်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အော...
မိဘကျေးဇူး အမှန်တကယ် သိတတ်ရိုသေတယ်ဆိုရင် မိဘစကား မ...
ကျမ တို့၏ လူထုခေါင်းဆောင် အပေါ်ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် သော...